प्रविधी खबर Archives - Page 14 of 14 - www.kchhakhabar.com
२०५० सम्म रोवर्टसँग बिहे र …..
अबको केही वर्षपछि तपाई हाम्रा बच्चाहरुले रोबोटसँग पनि विवाह गर्न सक्ने प्रविधि तयार हुँदैछ । वैज्ञानिकहरुले मानिसले रोवर्टसँग विवाह गर्ने दाबी गरेका छन् । सन् २०५० सम्ममा मानिसले रोबोटसँग विवाह गर्ने आर्टिफिसिय इन्टेलिजेन्स (एआई) एक्सपर्ट डा.डेभिड लेभीले दाबी गरेका हुन् । डा.डेभिडलाई कि त मानिसहरू चेस खेलमा उनको शक्तिलाई चिन्छन् कि त उनको एआईसँगको दशकौं लामो संलग्नताका कारणले चिन्छन् । एआई एक्सपर्...
फोन उठाउना साथ हेलो किन भनिन्छ ?
एजेन्सी , आज भोलि गाउ देखि शहरसम्म अधिकाँश मानिसको हात हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । मोबाइल वा फोन बाट दूरदराजका गाउ होस् वा बिकसित शहर मा बस्ने आफन्त संग कुराकानी गर्न सकिने यो प्रविधिको बिकाश सन् १८ ७६मा ग्राहम बेलले गरेका थिए । रोचक कुरा त् के भने हामीले फोनमा कुराकानीको सुरुवात नै हेलो बाट गर्ने गर्दछौ । त्यही हेलो भने शब्द कहिले र कहाँ बाट सुरु भयो ? ग्राहम बेलले जब फोनको आविस्कार गरे तब उ...
शनिबार, पौष ०९, २०७३
टेलिकमको सेवामा फोर–जी पुस १७ देखि
पुस ४ । नेपाल टेलिकमले पुस १७ गते देखि पोखरा र काठमाडौँमा फोर जी मोबाइल सेवा दिने भएको छ । टेलिकम पोखराका प्रमुख नरेशकाजी शाक्यका अनुसार पोखारामा फोर जी सेवा विस्तार गर्न हार्डवेयर र सफ्टवेयर थप्ने प्राविधिकहरु आइसकेका छन् । ‘पुस १७ देखि परीक्षणको रुपमा पोखरा र काठमाडौँमा फोर जी सेवा सुरु गर्दैछौँ,’ शाक्यले भने । उनका अनुसार प्राविधिकले बिटिएस टावरमा प्रविधि थप्नेछन् । उनका अनुसार काठमाडौँका बि...
सोमबार, पौष ०४, २०७३
खतरामा फेसबुकका कारण अस्मिता र सम्पत्ति
काठमाण्डु, ३ पुस– कमला (नाम परिवर्तन) लाई एउटा युवाको फेसबुकमा साथी बन्ने अनुरोध आयो । कमलाले अनुरोध गर्ने युवाको विवरण हेरिन् । ८. फेसबुक, ट्वीटर र द न्यू योर्क टाइम्स चीनमा २००९ सालदेखि नै ब्लक छ । तर पनि त्यहाँ यसका करिब ९ करोड प्रयोगकर्ता छन् । युवा युरोपमा बस्ने नेपाली रहेछन् । उनले साथी बन्ने अनुरोध स्वीकारिन् । कमला र ती युवा फेसबुकमा साथी भए । सरकारी सेवामा अधिकृत स्तरको जागिरे कमलासँग...
अानाैठाे भयाे बिहान उठ्दा लिङ्ग परिवर्तन !
एजेन्सी / एक युवलाई तेस्रोलिङ्गीसँगको दोस्ती निकै भारी पर्यो । राती तेस्रोलिङ्गीहरुले खानामा नशालु पदार्थ खुवाएर यी व्यक्तिको लिङ्ग काटिदिएका छन् । बिहान उठ्दा मात्र यसबारे थाहा पाएका उनले पुलिसमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । घटना भारतको फर्रुखाबादको हो । यहाँ बस्ने बिरजू पुत्र महेश चन्द्र तेस्रोलिङ्गीहरुसँग विवाहमा नाच्ने गाउने गर्दथे । उनै महेशको लिङ्ग काटिएको हो । पीडित युवकका अनुसार उनी गत ...
फेसबुकमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी ८ गल्ती, अकाउन्ट नै बन्द हुनसक्छ
फेसबुक हाम्रो जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु, फोटो पोस्ट गर्नु तथा अरुका पोस्टमा लाइक र कमेन्ट गर्नु हामीमध्ये धेरैको दैनिक रुटिन नै हो । फेसबुक चलाउने क्रममा यसका नीति-नियमहरुबारे जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । किनकी आफ्ना नीति-नियमहरुको उल्लघंन गरेको खण्डमा फेसबुकले सम्वन्धित व्यक्तिको एकाउन्ट बन्द गरिदिन सक्छ । कस्तो अवस्थामा फेसबुक एकाउन्ट ब्लक हुन सक्छ भन्ने जानकारी ...
पुस ३ गतेदेखि अब लाइसेन्सको सम्पूर्ण काम सल्लाघारी कार्यालयबाट हुने
यातायात व्यवस्था विभागले भक्तपुरको सल्लाघारीमा पुुस ३ गतदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने गरी कार्यालय खोल्ने भएको छ । कार्यालय स्थापनाका लागि घरभाडा सम्झौता गरी पुस ३ गते उद्घाटन गरेर काम सुरु गर्न लागिएको हो । उपत्यकामा ललितपुरको एकान्तकुनाबाट मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम हुँदा सेवाग्राहीको काम ढिला भएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक पूर्वाधार ...
काठमाडौं । एक सेकेण्डमै आफ्नो मोबाईल फूल चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यस्तो प्रविधिको विकास भएको छ कि अब त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेपछि तपाईको मोबाईल लामो समयसम्म चार्ज टिक्नेमात्रै होईन कि एक सेकेण्डमै मोबाईल फूल चार्ज पनि हुने बताईएको छ । युनिभर्सिटी अफ सेन्टर फ्लोरिडाका बैज्ञानिकहरुले आविस्कार गरेको सुपर क्यापासिटर ब्याट्रि प्रोटोटाईप नामक प्रविधिको प्रयोगले मोबाईल एक सेक...